Ithegi: abasebenzi | Martech Zone
Workamajig: Ulawulo lwezeMali kunye neProjekthi yeeArhente zokuYila
NgoLwesine, Meyi 15, 2014 Douglas Karr
I-Workamajig yinkqubo esekwe kwiwebhu yokulawula intengiso okanye iimali zearhente yokuthengisa kunye neeprojekthi zabaxumi. Ngaphezulu kweefemu ezingama-2,000 XNUMX zisebenzisa isoftware yolawulo lwentengiso kumasebe abo angaphakathi endlwini. I-Workamajig yinto enokwenziwa ngokwezifiso, isoftware esekwe kulawulo lweprojekti ehambisa yonke into eyenziwa yiarhente yakho - ukusuka kwishishini elitsha kunye nokuthengisa kukhokelela ekusebenzeni nasekusebenzeni koyilo, yonke indlela kumjikelo weprojekthi ukuya kugcino mali kunye nengxelo yemali. Iimpawu zeWorkamajig zibandakanya: iAccounting- icandelo
Lwesine, Disemba 19, 2013 Douglas Karr
I-Wildfire kunye ne-Ad Age kutshanje ziqhube uphando lubuza ngaphezulu kwama-500 abaphathi beshishini kunye nabaphathi malunga nendlela yabo kwintengiso yentlalo. Bafundile ukuba zeziphi ezona mpawu zintle kunye nezona ziphumelelayo ezenzayo ukubandakanya abaphulaphuli, kunye nezinto ezenziwa ngabo balwa noluntu. Imithombo yeendaba kwezentlalo akusekho khetho kwishishini, kubalulekile ukugcina nokukhusela ukuthembeka kwegama lakho kwi-intanethi. Ukusuka kwinkonzo yabathengi ukuya kwintengiso, unokufumana yonke into